ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းအသင်းကလပ်တွေမှာ မိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေ ရှိနေရတဲ့အကြောင်းအရင်း - JAPO Japanese News
ဂါ 03 Dec 2019, 10:40 မနက်
မန်နေဂျာ ( manager ) ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးကို မြင်တော့ ပထမဆုံး ဘယ်အရာကို တွေးမိပါသလဲ?
ကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်းတွေကို မဖြစ်နိုင်တာတွေပဲ လုပ်ခိုင်းပြီး စိတ်တိုလွယ်တဲ့ အထက်လူကြီးလား? ဒါမှမဟုတ် ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်မှာ အနုပညာရှင်တွေကို ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်တဲ့သူလား?
ပုံမှန်ဆို မန်နေဂျာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တစ်ယောက်ယောက် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ တဲ့သူလို့ တွေးမိကြမှာပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာတော့ မန်နေဂျာဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာ တခြားအဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ ယောက်ျားလေးတွေအတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးပေါ့…
ဂျပန်ကာတွန်း၊ အနီမေးရှင်းတွေကို ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် ဂျပန်ကျောင်းအသင်းကလပ်မှာ မိန်းကလေးမန်နေဂျာရှိတာကို သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီမိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေကို ဘယ်လို “စီမံခန့်ခွဲ（manage）” နေကြတာပါလိမ့်။
ကျောင်းအသင်းကလပ်ရဲ့ မိန်းကလေးမန်နေဂျာက အသင်းကို နည်းပြရုံသာမကဘဲ အသင်းလေ့ကျင့်မှုကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
မိန်းကလေးမန်နေဂျာရဲ့ တာဝန်ကို ပိုအခြေခံကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် အသင်းသားတွေရဲ့ ယူနီဖောင်းကို လျှော်ပေးခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ အသင်းကို အားပေးတာတွေအပြင် အနာတရဖြစ်တဲ့အသင်းသားကို ပြုစုပေးတာတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းသားအချင်းချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာလည်း ခုံသမာဓိနဲ့ဆုံးဖြတ်တာတွေ လုပ်ရပါတယ်။
ဒီလိုအရာတွေလုပ်နေရတာမို့လို့ ကျောင်းအသင်းကလပ်ရဲ့ မိန်းကလေးမန်နေဂျာက ရင်းနှီးဖော်ရွေရုံသာမကဘဲ တက်ကြွဖျတ်လပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ များပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိန်းကလေးမန်နေဂျာက ယောက်ျားလေးတွေပဲ ရှိတဲ့ အသင်းသားတွေကြားမှာ Madonna လိုမျိုးပါဘဲ။
မိုးရွာနေတဲ့အချိန်လည်း အသင်းသားကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ငိုကြွေးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘယ်လိုအချိန်ဖြစ်ဖြစ် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ပြီး အားပေးနေတဲ့ မိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေပါ။
ဒီလိုမျိုး မိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းယဥ်ကျေးမှုတွေမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကျောင်းအသင်းကလပ်ခေါင်းစဥ်နဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ အနီမေးရှင်းတွေ များလာတာပေ့ါနော်။
နာမည်ကျော် ဘေ့စ်ဘောကာတွန်းဖြစ်တဲ့ “Touch “ ရဲ့ Asaka Minami chan (タッチの朝倉みなみちゃん) ကလည်း မိန်းကလေးမန်နေဂျာအနေနဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ဇာတ်ကောင်ပါ။
ကျောင်းအသင်းကလပ် အထူးသဖြင့် အားကစားကလပ်မှာဆိုရင် ပြင်းထန်တဲ့ ယှဥ်ပြိုင်မှုတွေ ရှိပါတယ်။
ရလဒ်ကောင်းရဖို့အတွက် ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးလို့မဖြစ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ မန်နေဂျာတာဝန်ယူထားတဲ့ မိန်းကလေးအသင်းသားက အသေးစိတ်လိုက်လုပ်ပေးရရုံသာမက အသင်းရဲ့ ယှဥ်ပြိုင်လိုစိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့လည် လိုပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့ မန်နေဂျာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် အသင်းက စည်းလုံးပြီး ပြိုင်ပွဲမှာသာ အနိုင်ရရင် အလွန်ဂုဏ်ယူစရာပါ။
ဒီကျောင်းအသင်းကလပ်ရဲ့ မိန်းကလေးမန်နေဂျာက ကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်ကို ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာသာမက စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလည်း အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Dwango က ဒီမိန်းကလေးမန်နေဂျာပုံစံကို ကျင့်သုံးနေပုံရပါတယ်။
Dwango လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီက Niwango ကို လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီပြုလုပ်ထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး ဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မျှဝေမျှရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Niconicoဇာတ်ကားတွေကလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှာ အမျိုးသားအင်ဂျင်နီယာများစွာ ရှိတဲ့အတွက် ရုံးတွင်းလေထုက အမြဲ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့ အမျိုးသား ၀န်ထမ်းတော်တော်များများက ညဘက်နောက်ကျတဲ့ထိ အလုပ်လုပ်ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာ အလုပ်နောက်ကျကြတာတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Dwango ရဲ့ ဥက္ကဌက အမျိုးသမီး ၀န်ထမ်းတွေကို ငှားရမ်းပြီး အောက်ပါအစမ်းလုပ်ဆောင်မှုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကို ကျောင်းအားကစား ဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်စေပြီး “မိန်းကလေးမန်နေဂျာမှ ယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းအား ထမင်းဘူးပေးခြင်း” ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထမင်းဘူးကို ရဖို့အတွက် အမျိုးသားတွေက ပထမဦးဆုံး အချိန်မှန် အလုပ်တက်ရပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ ဒီမိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေက ဦးဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ ရေဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အတူတူလိုက်လုပ်ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ အမျိုးသား၀န်ထမ်းတွေက တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုကို ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ နေ့လည်စာစားချိန်မှာ တံဆိပ်ခေါင်းတစ်ခုနဲ့ နေ့လည်စာထမင်းဘူးကို လဲရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အတွက် ဝန်ထမ်းတွေက အချိန်မှန် ရုံးတက်လာကြပြီး အာဟာရမျှတတဲ့နေ့လည်စာ၊ သင့်တင့်တဲ့လေ့ကျင်ခန်းတွေကနေတစ်ဆင့် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိန်းသိမ်းလာနိုင်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရုံးမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ “မိန်းကလေးမန်နေဂျာ”ရှိတယ်လို့ တွေးလိုက်ရုံနဲ့တင် အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒါက တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကူးပါ။
ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီဆိုတဲ့ ယောကျာ်းတွေပဲရှိတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုအလုပ်တာဝန်မျိုးကို အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုပဲ လုပ်ခိုင်းတာက ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုပြီး မေးစရာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ယောကျာ်းလေးက မိန်းကလေးကို “ချစ်စရာကောင်းပြီး ကြိုးကြိုးစားစား အားပေးနေတဲ့ မိန်းကလေးမန်နေဂျာလေး” ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဥ်နေမယ်ဆိုရင် သိပ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးလား?
ပြီးတော့ အရင်ဆုံး ကျောင်းအသင်းကလပ်မန်နေဂျာက မိန်းကလေးတွေချည်း ဖြစ်နေတာကိုက သေချာစဥ်းစားကြည့်ရင် ထူးဆန်းမနေဘူးလား?
သင်တို့ရော ဒီမိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
မြန်မာအားကစားအသင်းမှာလည်း မိန်းကလေးမန်နေဂျာတွေကို ခေါ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါသလား? ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်လေးကို ရေးခဲ့ပါဦးနော်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲကို နေ့တိုင်းစားရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ? ??
အသင့်စားခေါက်ဆွဲကို စွန့်ဦးတီထွင်ခဲ့သူ（ အန်ဒိုး မိမိဖုခု）